Grupo Planeta inovhara iyo Círculo de Lectores nekuda kwekukosha kwayo purofiti | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ortiz | | Zvinyorwa, Literature, Dhijitari nyika, Noticias
Planet inovhara Denderedzwa revaverengi.
Digitization yatora pamusoro penzvimbo dzese dzehupenyu hwevanhu hwezuva nezuva. Mamiriro ezvinhu aripo anomanikidza makambani nevanhu kuti vagare munzvimbo inogara ichichinja. Chaizvoizvo izvo Nharo yaGrupo Planeta yekururamisa kuvharwa kweCírculo deLectores.
Kunyanya, chirevo chemuparidzi chinoreva kune "shanduko yemaitiro mukudyiwa kwevagari yakabva mukumisikidza kwakasimba kwehunyanzvi hutsva". Iyo inonzi Industrial Revolution 4.0 yakanyatsogadzirisa hupfumi; makwikwi acho anotyisa kupfuura nakare kose.
1 Internet kumisikidza zviyero
2 Kupera kwekirabhu ine inopfuura hafu yezana ramakore renhoroondo
3 Saka iko kukanganisa kwezvizvarwa zvitsva?
4 Book makirabhu izvozvi mabhuku ekubhuka
Internet kumisikidza zviyero
IInternet inoisa mitemo yezvinhu zvese: kutengeserana kwepasirese, kutaurirana, nzira dzekudyidzana, nzira dzekudzidzisa ... Naizvozvo, hazvishamise kuti iyo Círculo de Lectores yakabva pakuva nevanopfuura mamirioni 300.000 vanyoreri pakupera kwezana ramakore rapfuura kusvika panosvika mazana matatu ezviuru panguva yekuvharwa kwayo.
Kupera kwekirabhu ine inopfuura hafu yezana ramakore renhoroondo
Iyo Círculo deLectores yakawanikwa naGrupo Planeta muna2010. Panguva iyoyo vanga vatogadzira mapurojekiti akati wandei ane chinangwa chekubatanidza mukutengesa zvemagetsi uye kutora mukana wekushandisa kwezera redhijitari. Nekudaro, marongero aya haana kushanda zvakanyanya nekuda kwekufambira mberi kusingamisike kwehunyanzvi hwehunyanzvi seAmazon.
Izvo zvaikosha zvishoma kuti yaive kirabhu-yakamira-refu yakamisikidzwa muna 1962, kuitsigira kwenguva yakareba hakubatsiri. Kubva 2016, yaive neavhareji pagore kurasikirwa kweanosvika gumi neshanu muzana yekutengesa uye muna15 kuwedzera kwemari yemamirioni matanhatu emadhora kwaidiwa.
Tatarisana nekusakwanisa kukwezva vadyidzani vatsva, Grupo Planeta yakanyatsofungisisa shanduko yakananga kune bhizimusi modhi yakanyanya kuchinjika kune itsva nguva. Vazhinji veSpanish vacharasikirwa nekirabhu yakakura kwazvo yekuverenga munyika mavo, pamwe nevamiriri vayo vakawanda vane mvumo, makatalogu, maforamu einternet nenzvimbo dzevanonyoresa muzvitoro zvemabhuku.
Iyo imwechete burofax iyo yakazivisa kuvharwa kweDenderedzwa reVaverengi inopa mwenje diki wetariro kunhengo dzayo dzakatendeka kwazvo. Mune imwe yendima dzayo inoverengwa "zviuru makumi mashanu zvezvinhu zvakaedzwa kuvandudza iyi modhi, asi zvakagadziriswa kuvhara chimiro chebhizimusi, kwete kuvhara Denderedzwa, kuti vapinde munzira yeiyo ramangwana chimiro (chisati chadzidza).
Saka iko kukanganisa kwezvizvarwa zvitsva?
Chinhu chakareruka chingave chekufunga kuti "shanduko muhunhu hwevatengi" zvinokonzerwa nekuti izvo zvizvarwa zvitsva zvinoverenga zvishoma kupfuura vabereki vavo. Nekudaro, kana tichiongorora mune zvakadzama zvikonzero zvekuvharwa kweCírculo de Lectores, zviri pachena kuti chikonzero chakakosha kushomeka kwemazano ekutengesa nekusimudzira pamapuratifomu edhijitari. Ivo havana kuchinjika nenguva.
Chikamu chekutanga chakajeka cheruzivo kusarura kuripo kwakakomberedza izvo zvinonzi Zviuru zvemakore (vanhu vakazvarwa pakati pa1980 na1995) uye chizvarwa Z (akazvarwa mushure ma1995). Nekuti, zvinopesana netarisiro inotarisirwa yezvizvarwa zvakashurwa semunhu akazvimiririra uye asingafarire, iyo Zviuru zvemakore Ivo voracious vaverengi.
Iyo nyowani nyowani ndeye "mabhuku emabhuku".
Muchokwadi, iyo portal Biz! Republic Magazine (2019) yakashuma izvozvo muUnited States moga «80% yevechidiki vechidiki vane makore gumi nemasere kusvika makumi matatu nemashanu vakaverenga bhuku mune chero fomati mugore rekupedzisira, kusanganisira 72% avo vakaverenga rakadhindwa kopi. Sosi imwecheteyo inoratidza kuti maAmerican vanowana avhareji rebhuku rimwe chete kana mashanu pagore.
Saizvozvo, Cerezo (2016) inotaura mukuburitswa kwayo Chizvarwa Z uye ruzivo kuti shanduko dzetsika dzinokurumidza zvikuru nhasi. Haisisiri nyaya yemakumi emakore. Munyori anoti: "Imwe yemitambo mitsva inounzwa neshanduko yazvino ndiko kumhanya kwayo kwekuwedzera, hune simba rayo nekukurumidza uye panguva imwe chete mumativi akasiyana epasi."
Book makirabhu izvozvi mabhuku ekubhuka
Iyo Ecoosfera portal (2019) inotsanangura Generation Y (millennials) sechizvarwa chekutanga pasirese, kuvonga nekukura uchiziva nezve internet uye nekuona kupararira kwe digitization. Saizvozvowo, dambudziko rezvehupfumi hwenyika uye zviitiko zvakaita sekushanduka kwemamiriro ekunze zvakaratidza zvakanyanya zvido zvavo netsika.
Nekudaro, mamireniyamu anowanzo gara akanyatsoziva pane akasiyana ezvematongerwo enyika uye ecological nyaya. Aya mamiriro akaendesa kusiyaniswa kwemashoko enzvimbo. Haisisiri mabhuku chete, ikozvino raibhurari chaiyo, maforamu uye zvinyorwa zvepamhepo zvakaringana zvakaenzana.
Uye zvakare, pfungwa yevaverengi yakakosha, zvese kuti vakwanise uye nekupa mipiro inosimudzira kukosha kweruzivo. Neichi chikonzero, vanachipangamazano vanoona mabhukiti setiraiti yakanyatsoita uye inowirirana mapuratifomu anounza pamwechete zvese zvataurwa.
Muchiitiko chekuvharwa kweDenderedzwa reVaverengi veGrupo Planeta, dzimwe nzira dzekushanduka mukati medhi redhijitari dzatovepo. Zvichida mune ramangwana risiri kure kwazvo kudzoka sebhuku rebhubhu kana mune yakafanana bhizimusi modhi inogona kukwikwidza mukati meiyo inotyisa Industrial Revolution 4.0 ichave inogoneka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Grupo Planeta inovhara iyo Denderedzwa yeVaverengi
Sergio Fulgencio Sarabia akadaro
Masikati akanaka. Ini ndinoda ruzivo nezvekuti vanodzosera sei mari iyo yandisina kushandisa, uye iyo ichiri kuunganidzwa ipapo. Ndatenda . Shuwiro yakanakisa
Pindura Sergio Fulgencio Sarabia
Pedro Suenz akadaro
Aimbove director weCírculo de Lectores, Hans Meinke, akanzwisisa kuti ramangwana reCírculo raigona kuve chii: kirabhu yebhuku yekugona, iyo inotarisira hunyanzvi hwekugadzira mabhuku akanaka, akasungwa zvakanaka, anoratidzwa, achiperekedzwa nezviitiko zvakasiyana zvetsika. Bertelsmann, zvakadaro, iboka rekushambadzira iro rakazvipira mukuparadzwa kwakarongeka kwenyika inodhinda nekutora huwandu hukuru hwedzimba dzekutsikisa kuGerman nepasirese, uye kunyanya iwo makirabhu emabhuku, ayo ainyanya kugadzirwa neGerman kubva 1919, kunyangwe paive nevakatangira, uye zvakatonyanya kubva kumakore epashure pehondo (kuma1950), pakange paine kukura kukuru mune iyi mhando yekutengesa chiteshi. Nekushandurwa kwemusika uye kudigitalisita, Bertelsmann akangosarudza kurova yake yekutanga Círculo de Lectores (Bertelsmann Lesering), yava kunzi The Club chete, mushure mekumedza 95% yemakirabhu akauya kuGerman, Austria neSwitzerland. Mediocrity haina kungokunda chete, yakazovewozve semupepeti wenhau. Círculo deLectores de España yakanga yakasiyana, nekuti Hans Meinke aiziva kutevedzera modhi yeGutemberg Librero Guild (Büchergilde Gutenberg), yakatangwa muna 1924 (mugore rimwe chete naDeutsche Buch-Gemeinschaft, yakamedza 50% muna 1969 naBertelsmann uye yakaparadzwa sesangano rakazvimirira kubva muna 1974 kusvika muna 1988). SaBüchergilde, Círculo yakaburitsa emhando yepamusoro mabhuku, akasungwa zvakanaka uye nemhando dzakasiyana dzemanyoro ezvinyorwa kana mhando. Círculo ingadai yakapona neayo aripo mazana matatu ezviuru zvevatengi-vanobatirana vachichengetedza iro redhiyo mutsara waHans Meinke muBüchergilde maitiro. Asi Bertelsmann akabvisa mutengo wekirabhu wekutengesa nekuutambidza kune muparidzi wepakati: Planeta. Chinhu chisina kunzwisisika, nekuti muPortugal Círculo de Lectores ichiri mumaoko aBertelsmann (Bertrand), uye muArgentina nedzimwe nyika zvakare. MuFrance, France Loisirs yakava iyo pfuma yese yevakavamba.
Pindura Pedro Suenz
«» »Ruzivo rwekutanga ruri pachena rusaruro ruripo kwakakomberedza anonzi makore ane chiuru (vanhu vakazvarwa pakati pa1980 na1995) uye chizvarwa Z (chakazvarwa mushure ma1995). Nekuti, zvinopesana neyakajairika kutarisirwa kwezvizvarwa zvakashurirwa semunhu akazvimiririra uye asingafarire, mamireniyamu anoverengera kuverenga.
Muchokwadi, iyo Biz! Republic Magazine (2019) yakashuma kuti muUnited States moga "80% yevechidiki vechidiki vane makore 18 kusvika 35 vakaverenga bhuku mune chero fomati mugore rapfuura, kusanganisira 72% vakaverenga kopi yekudhinda". Sosi imwecheteyo inoratidza kuti maAmerican vanowana avhareji rebhuku rimwe chete kana mashanu pagore. »» »»
Kuverenga bhuku here gore kuve kuverengera kuverenga? Saka tichazovei isu vedu vanoverenga 2-3 pamwedzi?
Ini ndinobvumirana nekomendi yekupedzisira, iwe unofunga kuti kutenga mabhuku mashanu pagore kuve kuverenga kwakasimba…. tichamira kupi. Kwandiri zvakave zvinonyadzisa zvikuru kuti vakavhara denderedzwa revaverengi kubvira pandakave nhengo kwemakore mazhinji, kunyangwe zvakadaro ndine bhuku remagetsi, asi iro bhuku repepa, hwema hwebhuku idzva iripi, vabate uye vhura mapeji. Chizvarwa chazvino hachiverenge zvachose chero chinhu, mashoma mashoma emireniyoni uye chizvarwa z (ndine urombo neruzivo rwangu rwenhema asi ini ndaifunga kuti mamireniyoni ndiwo akaberekwa mushure ma2000 uye chimwe chinhu, ini handina kumbonzwa nezve chizvarwa z, zvinoita senge inotyisa novel) Kupfuura chero chinhu nekuti ndine mwana wemakore gumi nematanhatu uye ini ndinomuona maari uye mune vazhinji vaanoshanda navo neshamwari. Ini ndinozvitora semunhu anoverengera kuverenga kubva pandakaverenga bhuku pasvondo, kana ndichirida mumazuva mashanu uye kana richindibata kubva papeji rekutanga mumazuva matatu kana maviri kunyangwe. Ini ndinotadza kuverenga kuti mangani andinoverenga pagore, asi mashanu angave anoseka
Cesar Patiño akadaro
Zvinorwadza chaizvo kuti Círculo de Lectores haina kuchinjika kune matekinoroji matsva. Ndakakurira pamwe naye, baba vangu vaichengeta magazini, pakanga pasina asingasviki maviri kana matatu mabhuku aive asara kumba, lps emarudzi ese emumhanzi. Ndatenda Denderedzwa reVaverengi. Iwe uchagara uri mumweya yeavo vedu vanofarira kuverenga nemimhanzi. Hug kubva kuBototá.
Pindura kuna César Patiño